4 egwuregwu dị egwu ị nwere ike ịnụ ụtọ ugbu a na Mac gị Esi m mac
4 ịrịba egwuregwu na ị nwere ike ugbu a na-enwe na gị Mac
Ọ bụrụ na ị na-ele anya na-akpali akpali ọhụrụ egwuregwu na-enwe na gị Mac, taa, anyị na-ewetara gị ụfọdụ ọhụụ ọhụrụ kachasị dị ugbu a dị adị kemgbe October gara aga. Otu n'ime ha bụ Civilis VI, nke ewepụtara maka Mac n'otu oge ahụ ọ dị maka PC, mana enwekwara aha ọhụụ ndị ọzọ mara mma ma na-atọ ụtọ.
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na egwuregwu ndị ị na-emebu na ị na-achọ ọhụụ ọhụụ nke ị ga-eji oge gị na-eme ihe zuru oke nke Mac gị, echefula ndepụta egwuregwu ndị a ma hụ ha nke ọma n'ihi Black Friday bụ dị nnọọ n'akụkụ na onye maara, ma eleghị anya ya mmepe na-akwadebe a succulent ego.
2 Ugbo Simulator 17
"Civilization VI" bụ otu n'ime egwuregwu ndị kachasị ewu ewu ma na-aga nke ọma n'oge na-adịbeghị anya, maka ihe ọ ruteworị n'ụdị nke isii ya. O nweela onyinye 15 E3 na otuto ya, gụnyere egwuregwu PC kachasị mma na egwuregwu kachasị mma. Civilization VI bụ a Tụgharịa dabeere na usoro egwuregwu nke ị ga-ewulite mmepe nke aka gị ma debe ya ndụ site na Prehistory ruo oge a. Iji mee nke a, ị ga-emerịrị onwe gị iji merie ụwa iji mepụta alaeze n'ezie site na ịnwale nka mmekọrịta gị na mba, ike ịlụ ọgụ na ihu otu n'ime ndị isi kachasị ukwuu na akụkọ ntolite.
CivilI VI, nke saga ya rereworị ihe karịrị nkeji 35 na ụwa, na-enye atụmatụ ndị pụtara ìhè dịka "ọnọdụ ịgbatị agbatị", "diplọma ike", "ogwe aka jikọtara ọnụ", mmụba anụ ahụ nke obodo na map na ọtụtụ mgbakwunye.
N'oge a, ọ kabeghị aka na Mac App Store, mana ọ bụ ebe a na ọnụahịa nke 59,99 euro na ụdị nke ya, ma ọ bụ euro 79,99 na ụdị Digital Deluxe ya.
Mkpọrọ VI bụ ọhụrụ isi egwuregwu ntọhapụ maka Mac
Ugbo Simulator 17
Ndị Giants Software mepụtara, Farming Simulator nwere ike ịbụ aha na-enweghị mmasị maka ndị egwuregwu kachasị egwu mana eziokwu bụ na ọ bụrụla ihe ịga nke ọma maka ọtụtụ nde ndị ọrụ yana n'eziokwu, ọ dịlarị na ụdị nke iri na asaa ya.
Dịka o nwere ike ịbụ na ị chọpụtala, na egwuregwu a Ga-ahụ maka ịkọ ihe nke ọma ọtụtụ narị hectare ala, ị ga-anya karịa ụgbọ ala 250 maka iji ọrụ ugbo, ị ga-elekọta anụ ụlọ na ọtụtụ ndị ọzọ. I nwekwara ike igwu egwu n'ịntanetị site na ihe ruru ndị egwuregwu 16 na mkpokọta.
Nwere ike ibudata Ugbo Simulator 17 maka euro 34,99 ebe a.
Mad Max Ọ bụ kpochapụwo na-agaghị Agbaghara. Ebu ụzọ wepụta maka nyiwe ndị ọzọ na ọdịda ikpeazụ, ọ mechara nweta Apple Macs ugbu a. jikere maka siri ike melee agha na banye n'ụgbọ ndị kachasị mma na mbara ọzara na-eyi ka ọ bụ adịghị agwụ agwụ.
Mgbe ohi nke Interceptor ya gasịrị, ndị otu Max tinyere igwe na-arụ ọrụ Chumbucket ga-ewulite ụgbọ kacha lanarị, "Magnum Opus." Ndị na-egwu egwu nwere ike ịmepụta, hazie, ma kwalite ụgbọ ha site na ịhọrọ site na ụgbọ ala dị iche iche na nkwalite na-enweghị ngwụcha, gụnyere ngwa agha, ngwa agha, na injin, iji gbanahụ mbara ala nke ịgbachi nkịtị.
Gagharị na Wasteland, ndị egwuregwu ga-ezute ọtụtụ ndị iro na nnukwu post-apocalyptic na-emeghe ụwa na ọtụtụ ebe imikpu, ọtụtụ n'ime ha foduru ụwa pre-apocalypse.
Ị nwere ike budata ya ebe a maka euro 29,99.
aragami bụ egwuregwu nke «Stealth-Action» genre nke ike na ngwa ngwa ọgụ nke ndị ọzọ egwuregwu starring agha nye ụzọ stealth dominance ịghọ ezigbo ninja egbu.
Ọ na-agụnye aghụghọ "ịtụnanya" maka ọtụtụ, dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike igbanye onyinyo iji zoo gị ma ọ bụ ndị iro gị, kpọọ dragon ka o rie ha ma ọ bụ kpọọ onwe gị n'okporo ụzọ dị mkpirikpi iji wakpo onye gị na ya.
Ị nwere ike zụta Aragami n'elu ikpo okwu iyi maka euro 19,99.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Egwuregwu » 4 ịrịba egwuregwu na ị nwere ike ugbu a na-enwe na gị Mac
Etu esi ejikwa ngwaọrụ "demo" kwa ụbọchị na Storelọ Ahịa Apple
Akwụsịrị ụda mmalite na Macbook Pro ọhụrụ. Anyị na-egosi gị otu ị ga-esi megharịa ya